Terror Free Somalia Foundation: Waxaafadeed shirka golaha Wasiirada Maamul goboleedyada
Waxaafadeed shirka golaha Wasiirada Maamul goboleedyada
Warsaxaafadeed shirka golaha Wasiirada Muqdisho, March, 29.2011--------Shir aan caadi ahayn oo ay maanta isugu yimaadeen Golaha Wasiirada uuna shir gudoomiyay Ra’iisal Wasaaraha Mudane: Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa looga dooday qaabka federalism-ka iyo habdhismeedka dawlad goboleedyada.
Sida uu qabo axdiga KMG dawladda Soomaaliya waxay dhiira galinaysaa hirgelinta nidaamka Federaalka, waxayse ka digaysaa in dalka Jamhuuriyada Soomaaliya laga dhigo degmooyin yar yar oo jufooyin u kala qo-qoban lana abuuro iska horkeen dadka walaalaha oo hadaba nabad kuwada nool.
Axdiga KMG qaranka waxa uu qabaa in la dhiiragaliyo dawlad goboleedyada dhismay ka hor inta aan la samayn axdiga KMG qaranka, sida ku cad axdiga, dawlad goboleed waxaa noqon kara laba gobol iyo wixii ka badan oo ka mid ah 18-kii gobol kuna yimid tilmaanta sharciga, jihaynta dawlada dhexe iyo rabitaanka dadka.
Sidaa awgeed, wax kasta oo ku yimaada si aan waaqasanayn nidaamka aan soo sheegnay waxaa loo aqoonsanayaa waxba kama jiraan.
Ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay ka digtoonaadaan wax kasta oo midnimadooda iyo wada noolaanshahooda dhaawici kara.